Technology – XB Media Myanmar
ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြား အ တှကျ ဒါလေးတှေ လုပျလိုကျပါ အိုကသှေားလိမျ့မယျ နျော..
ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြား အတှကျ ဒါလတှေေ လုပျလိုကျပါ အိုကသှေားလိမျ့မယျနျော.. ပုံမှနျ ဝငျငှရှေိပွီး လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ မစုမိသူမြား အတှကျ ပိုကျဆံ စုတယျ ဆိုတာ ရညျမှနျးခကျြ တဈခု ထားပွီး ရရှေညျ တညျဆောကျ ထားသငျ့တဲ့ အလအေ့ကငျြ့ တဈခုဖွဈပါတယျ… ။ ငှကွေေး အောငျ မွငျမှုမှာ ပိုကျဆံ ဘယျလောကျ ဝငျတယျ ဆိုတာထကျ ဘယျလောကျ စုနိုငျတယျ ဆိုတာက ပိုအရေးကွီးပါတယျ… ။ လူတှကေ မဝငျသေးတဲ့ ပိုကျဆံကို မြှျောကိုးပွီး အကွှေး ယူတတျကွတယျ… ။ ဒါက အဓိက မှားယှငျးနတေဲ့ အခကျြပဲ… ။ ကြှနျတျောတို့တှေ ပိုကျဆံစုနတေဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလို ဗြူဟာတှေ သုံးရမလဲဆိုတာ အခကျြကကြ တငျပွခငျြပါတယျ. . . ။ ။ ၁။ သုံးပွီးမှ မစုလနေဲ့… လစာထုတျတာနဲ့ လိုခငျြတဲ့ပစ်စညျးတှကေို ဝယျပွီးမှ ပိုကျဆံ စုတတျကွတယျ ။ တကယျတမျးတော့ လစဉျ စုဆောငျးမယျ့ ပိုကျဆံပမာဏကို သတျမှတျစုဆောငျးပွီးမှသာ လိုအပျတဲ့အရာတှကေို ဝယျသငျ့ပါတယျ ။စာထုတျတာနဲ့ ပထမဆုံးလုပျရမှာက…
အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ စည်းကြပ်ခွန်တွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုးကောက်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကို အရှိန်ပြန်မြှင့်ခဲ့တဲ့အပြင် ကြာသပတေးနေ့မှာဟွာဝေးကို အမေရိကန်အစိုးရက လုပ်ငန်းကန့်သတ်ချက်တွေထားလိုက်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဟွာဝေးဖုန်းတွေမှာ ဂူဂယ်အက်ပလီကေးရှင်းတွေအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်မယ်လို့ ဂူဂယ်ကပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေက အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ AppleIncရဲ့အိုင်ဖုန်းတွေအသုံးမပြုဖို့ တွစ်တာလိုမျိုးတရုတ်လူမှုကွန်ရက် Weibo မှာ တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ ဟွာဝေးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု(Function)တွေက အိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တန်းတူရှိနေသလို သာတာတွေတောင်ရှိတယ်။ အဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့စမတ်ဖုန်းရှိနေတာကို ငါတို့က ဘာလို့အိုင်ဖုန်းသုံးရမှာလဲလို့Weiboသုံးတဲ့တရုတ်လူမျိုးတစ်ယောက်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကို စောင့်ကြည့်နေရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းလဲကိုင်မယ်လို့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ အကောင့်တုတွေလို့ယူဆရတဲ့တွစ်တာက တရုတ်ဘာသာသုံးတဲ့အကောင့်တွေမှာလည်း အလားတူလှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ကစခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ တရုတ်ရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲဆိုတာပြပြီးသားပါ။ တိုက်တော့မတိုက်ချင်ဘူး။ ကြောက်လို့မတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ အကောင့်တုတွေရေးနေတဲ့တွိတွေထဲမှာပါနေပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး ၃ လမှာ တရုန်မှာ အိုင်ဖုန်းရောင်းအား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး အလားတူကာလမှာပဲ ဟွာဝေးစမတ်ဖုန်းအရောင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတယ်လို့ အစီရင်ခံစာ ၂ ခုကို ကိုးကားပြီး Buzzfeedသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ အကောင့်တုတွေလို့ယူဆရတဲ့တွစ်တာက တရုတ်ဘာသာသုံးတဲ့အကောင့်တွေမှာလည်း အလားတူလှုံ့ဆော်မှုမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ကစခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲမှာ တရုတ်ရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲဆိုတာပြပြီးသားပါ။ တိုက်တော့မတိုက်ချင်ဘူး။ ကြောက်လို့မတိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ အကောင့်တုတွေရေးနေတဲ့တွိတွေထဲမှာပါနေပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး ၃ လမှာ တရုန်မှာ အိုင်ဖုန်းရောင်းအား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး အလားတူကာလမှာပဲ ဟွာဝေးစမတ်ဖုန်းအရောင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတယ်လို့ အစီရင်ခံစာ ၂ ခုကို…
April 28, 2019 Bestie_Author
1. ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသည့် password ကို အသုံးပြုခြင်း account name ​မွေး​နေ့ ဖုန်းနံပါတ်​တွေကို password အဖြစ်သုံးခြင်း၊ bf / gf name ​တွေ အိမ်​မွေး pet နာမည်​တွေကို password အဖြစ်သုံးခြင်း၊ zxcvbnm 1234567 keyboard ​ပေါ်ကဂဏန်း​တွေကို အစဉ်လိုက်ရိုက်ပြီးသုံးခြင်း ၊ အဲလိုမျိုး password ​တွေအသုံးပြုခြင်းကို လုံးဝ​ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို​ပြောထားလို့ password ကို %#$@*!_-_ ​တွေနဲ့ အရမ်းခက်​အောင် လုပ်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အပြင်လူ​တွေ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူ​တွေ အလွယ်တကူမသိနိုင်တာမျိုးဆိုရင် လုံ​လောက်ပါတယ်။ 2. password တစ်ခုထဲကို ​နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုခြင်း ဒါက​တော့ လုံးဝ​ရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အ​ပေါ်မှာ​ပြောထားသလို ခန့်မှန်းရမလွယ်တဲ့ password ကို သုံး​နေ​ပေမယ့် အဲဒီ pw ကိုပဲ facebook, instagram, twitter, bank account အကုန်လုံးမှာ သုံးထားတယ်ဆိုရင်​တော့ အရမ်းကို အန္တရာယ်များသွားပါပြီ။account တစ်ခုအခိုးခံရတာနဲ့ တခြား account ​တွေပါ အကုန်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ် password တစ်ခုကို account တစ်ခုမှာပဲ သုံးပါ။ 3. မစူးစမ်းမဆင်ခြင်…
အခုခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံးမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာ မတွေးရဲစရာပါပဲ။ဒါဟာသတင်း၊ အလုပ်၊ စာအုပ်၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂိမ်း၊ အင်တာနက် စတာတွေကိုတစ်နေရာတည်းမှာချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဘက်ထရီကကုန်ကုန်သွားတတ်တဲ့အတွက် တစ်နေ့တာအသုံးပြုဖို့တောင်မလုံမလောက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အခုလိုနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ လူအများစုဟာ ဘက်ထရီသွင်းတဲ့အပေါက်ကိုသန့်ရှင်းရေးမလုပ်ကြပါဘူး။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့သတိရပါ။ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုသာသန့်ရှင်းရေးလုပ်သင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အားသွင်းတဲ့အပေါက်ကိုလဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။ ထိပ်အချွန်ပါတဲ့ နားကြပ်တံ ဒါမှမဟုတ် သွားကြားထိုးတံနဲ့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၂။တောက်ပတဲ့ Wallpaper ထားခြင်း အချိန်၊ Messages နဲ့ Missed calls တွေကိုသင့်ဖုန်းမှာသင်တစ်ချိန်လုံးလိုလိုကြည့်နေရတာပါ။ သင့်ဖုန်းရဲ့အဓိကမျက်နှာပြင်မှာ အရမ်းတောက်လွန်းတဲ့ Wallpapers ထားမယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းဘက်ထရီပိုကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဖြူအမည်း wallpaper ကိုထားတာကပိုကောင်းပါတယ်။ အဲ့လိုထားမယ်ဆိုရင် သင့်ဘက်ထရီကိုကြာရှည်ခံစေမှာပါ။ ၃။ဖုန်းကိုအမြဲတမ်းလက်ထဲမှာကိုင်ထားခြင်း ရာသီဥတုပူတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းကိုအမြဲလက်ထဲမှာကိုင်ဆောင်မထားသင့်ပါဘူး။ အပူချိန်မြင့်တဲ့အတွက် ဖုန်းလဲပူလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့အပြင် သင့်လက်ရဲ့အနွေးဓာတ်ကြောင့်လဲ ဖုန်းကိုအပူလွန်ကဲတာမျိုးဖြစ်သွားစေနိုင်ပီး ဘက်ထရီအကုန်မြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၄။Auto-Rotate ကိုဖွင့်ထားမိခြင်း မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် Auto-Rotate ကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ။ သူ့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ အထူးအာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ accelerometer ကဘက်ထရီအင်မတန်စားပါတယ်။ ၅။နောက်ကွယ်မှာ သုံးပီးသား App တွေ Run နေခြင်း လူတွေဟာ App အတော်များများကိုအသုံးပြုပီးတဲ့အခါမှာ ဒီတိုင်းပဲထွက်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့အခါမှာ နောက်ကွယ်မှာ App တွေက Run နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်…
သင့် စမတ်ဖုန်းမှ ဘက်ထရီဟာ အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားကြပါတယ်။ အချိန်ကာလအပြင် သင့်ရဲ့ ဖုန်းအားသွင်းမှုပုံစံကလည်း ဘက်ထရီရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ၁။မကြာခဏအားသွင်းခြင်း ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ရတဲ့ အချိန်လေးမှာ ဖုန်းကို မကြာခဏအားသွင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်က ကောင်းပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ဖုန်းကို မကြာခဏ အားသွင်းတာဟာ ဘက်ထရီကို မထိခိုက်စေဘူးလို့ Battery University က ပြောပါတယ်။ ၂။အားလုံးဝ ကုန်သွားအောင် အသုံးပြုခြင်း အချို့က ဖုန်းကို အားကုန်အောင် သုံးတဲ့ Deep Discharges နည်းလမ်းဟာ ဘက်ထရီ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ လုံးဝ မှားယွင်းပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက ဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ၃။အသင့်တော်ဆုံး ဘက်ထရီပမာဏ Battery University က ဖုန်းများမှာ ပါတဲ့ လစ်သီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများကို ၆၅ ကနေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းမှာ ထားရှိခြင်းက ဘက်ထရီ ကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး အနေအထားမှာ ရှိစေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် ဖုန်းသုံးနေသူများအတွက်တော့ အဲဒီ ပမာဏ အကြားမှာ အမြဲထားဖို့က…
ကျွန်တော်တို့တွေ ကွန်ပျူတာနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ စာရိုက်တဲ့အခါတွေမှာ Mouse ကို အသုံးပြုတာအပြင် Keyboard ပေါ်က Shortcuts လေးတွေကို အထာကျကျ အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ပိုတွင်ပြီး ပိုလို့ လွယ်ကူ မြန်ဆန်စေတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ shortcut keys တွေထဲမှာ အရင်ဆုံး Ctrl+ keys တွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်..။ Ctrl လို့ ပြောလိုက်ရင် အများစု ပြေးမြင်ကြမှာက Ctrl+ A, Ctrl+ C, Ctrl + V နဲ့ Ctrl+ X တို့ ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ Ctrl ကို ရှိသမျှ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာတွေ အားလုံးနဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ လူသိတော်တော် နည်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါဆို Ctrl နဲ့ အက္ခရာတွေ ဘယ်လို ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးရင် ဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတာ တစ်ချက် ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်… Ctrl +A ဒါတော့ လူသိများပါတယ်။ Select All ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ စာတွေရော ပုံတွေပါ ရှိသမျှ အကုန်လုံး Select…
Apple ရဲ့ iPhone SE ဟာ iPhone ချစ်သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို အမှတ်ရဖွယ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ iPhone တွေကို လုံးဝနေရာတစ်ခုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone 5S ဒီဇိုင်းနဲ့ iPhone 6S အတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ ဒီ iPhone SE ဟာ အရင်တုန်းက iPhone ပုံစံကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် အဓိကရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး iPhone SE ဟာ ထွက်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းက အောင်မြင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာရတာကလည်း ဈေးနှုန်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ ထွက်ရှိတဲ့အချိန်ထဲက ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ပဲ ထွက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone Latest Model ကို ဈေးကြီးပေးပြီးလည်း မသုံးချင်၊ iPhone အသေးကို ပြန်ကိုင်ချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ iPhone SE ကို သဘောကျတဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိလာပါပြီ။ ဒါကတော့ Apple ကနေ iPhone SE ကို Refurbished Version မဟုတ်တဲ့ Brand New တွေကို ဈေးလျော့ပြီး US Apple Online Store ကနေ တရားဝင်ပြန်လည်ရောင်းချနေတာပါ။ အခု Apple ကနေ…
နည်းပညာတိုးတက်လာချိန်မှာ ကွန်ပျူတာစနစ်ထဲက ချွတ်ယွင်းချက်လေးတစ်ခု၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တစ်ခုကြောင့် ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီပြီး ဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ရဲ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစနစ်ကို မျက်ခြေမပြတ် ဂရုစိုက်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမှာ ထိပ်တန်းအဆင့် အလွတ်တန်းဟက်ကာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်စလာ(Tesla)ကုမ္ပဏီလို ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလို အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးစနစ်ထဲက အပြစ်အနာအဆာတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးရုံနဲ့ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ လောက်(မြန်မာငွေ သန်း ၈၀၀ နီးပါး) ရှာနိုင်တယ်လို့ Bugcrowd ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီညွတ်တဲ့ Bugcrowd ကုမ္ပဏီဟာ ချွတ်ယွင်းချက်ရှာဖွေရေးဆုကြေးစားလုပ်ငန်းစု (bug bounty) တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ ကွန်ပျူတာစနစ် လုံခြုံမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ စစ်ဆေးခံလိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအပြစ်အနာတွေ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ဟက်ကာတွေကြား ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဟက်ကာတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီကြား ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စာချုပ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦက အပြစ်အနာအဆာကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရင် ဟက်ကာတွေ ဆုကြေးရပါတယ်။ သူတို့ ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့ပြဿနာ ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆုကြေးရတာပါ။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်မှာ လစ်လပ်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင် သန်းချီရှိနေလို့ ကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစမ်းသပ်မှုအတွက် နည်းလမ်းသစ်တွေ…
November 24, 2018 Bestie_Author
ရိုးရာလေးပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား။ ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားကို သဘောကျနေမိပြီလဲ။ ဝယ်ဖို့ကြံနေတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားက ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ တကယ်ကိုက်ရဲ့လားဆိုတာရော စစ်ကြည့်ပြီးပြီလား။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖုန်းအသစ်မဝယ်ခင် စစ်ကြည့်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးမှာမို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ အဓိကအနေနဲ့ အချက် ၆ ချက်ကို မဖြစ်မနေ အရင်ကြည့်ရပါမယ်။ ဒီအချက်တွေကတော့ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား၊ ဘထ္ထရီ၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ၊ RAM၊ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ နဲ့ ကင်မရာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အမျိုးအစားပါ။ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစား မကောင်းရင် ရေရှည်သုံးဖို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်ခြေလည်း ပိုများတဲ့အပြင် ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ရတာလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ဂိမ်းဆော့တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားကို လိုအပ်တာမို့ အရွယ်အစားနဲ့ အမျိုးအစားကို စစ်ဆေးဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကြီးတဲ့ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် 1920×1080p ထက် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးနိမ့်တာကို မရွေးသင့်ပါဘူး။ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဘထ္ထရီက သိပ်အရေးပါပါတယ်။ ဘထ္ထရီသိုလှောင်မှုပမာဏ နည်းတဲ့အခါ အားကုန်လွယ်ပြီး အလုပ်မတွင်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ ကိုယ်က တစ်နေကုန် သုံးနေတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ သိုလှောင်မှုပမာဏများတာတင်မက အားသွင်းမြန်တာကိုပါ ရွေးသင့်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းတွေမှာ fast charging စနစ် ပါဝင်လာပြီး…